Cayenne: tilmaamo iyo tabaha lagu koriyo oo loo cuno - Ikkaro
Inicio >> Dabeecadda >> Cayenne
Waxaan jecelahay inaan cuno cayenne cusub, laakiin maadaama had iyo jeer ay aad u badan yihiin, waa inaad ka fikirto waxa ku dhacaya iyaga. Waxaan ku badbaadin karnaa siyaabo kala duwan.
Iyaga qallaji oo baabi'i markii loo baahdo.
shiidi oo budo samee
burburi kuna cusbo milix si aad u qaadato milix cusbo leh
saliid ku kari ilaa saliida.
Kuwani waa qoraalladii sanadihii kala duwanaa ee aan beerayay.
Waxaan ka soo iibsanayaa xanaanada carruurta laba geed oo ubax ah. Waxay leeyihiin waxqabad heer sare ah, in kasta oo ay dheryo ku jiraan waxaa ka buuxsamay cayenne. Duurka ugu weyn waxaan ku qaatay 92 qabow kan kale 64. Midkan labaad ku dhowaad ma qaniino sidaa darteed ma badbaadin doono iniintiisa
Sannadkan waxaan mar kale ka beerayaa midho ka yimid mid ka mid ah dhirtii sanadkii hore, oo ahayd mid aad u cuncun.
Markay tahay 6-2-2020 waxaan qodaa abuurka 10-ka waxaan ku beeray meedad abuur waxayna ku dhejiyeen busta kuleylka ah mana ahan illaa xagaaga markaan bilaabayo inaan soo qaato cayenne Waxaa intaas sii dheer, waxaan ku jirnaa Nofeembar welina waxaa jira cows cagaaran.
Waan ka faalloodaa sababta oo ah marar badan ayaa la sheegay in laga bilaabo waqtiga iniinyaha la beero aad midho ku dhasho 3 bilood. Laakiin waligey maan fakarin kahor 5-6 bilood.
Aakhirkii waxaan beeray 7 geed oo cayenne ah, laakiin markan halkii aan ka dhergin lahaa, waxaan ku beeray beerta. Arimaha faafa awgood, ma awoodin inaan sifiican ugaqaybgalo maxaa yeelay ma dhaqaaqi karo markasta oo aan doono.
Dhirta ayaa aad uga yaraa sidii sanadkii hore waxaana sidoo kale jiray dhir aad u yar oo basbaas ah. 70 ka mid ah dhirta 7, waddo dheer oo laga bilaabo 2019 laakiin ku filan guriga.
Ma ogi haddii waraabka ka sokow, dhulku saamayn ku yeeshay dhulka, dhulka ku yaal beerta beertana aan la bacrimin sannado iyo sannado, iyo daryeel la'aan.
2021 waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo compost.
Saadaashu waa in la beero 6 geed, beero jardiin ah, laguna tijaabiyo dhulal kala duwan.